Ultrasmergarka jirka ee xubnaha taranka dumarka waa mid ka mid ah labada hab ee ugu badan ee loo isticmaalo baaritaanka xubnaha ee miskaha yar. Nidaamkan, sida qaanuunku, wuxuu tilmaamayaa iyo ultrasdominal ultrasound. Marmarka qaarkood waa lagama maarmaan in la baaro ka-hortagga jinsiga si loo ogaado sababta maqnaashaha.
Sidee loo sameeyaa ultrasound-ka taranka?
Aqoonsiga xadgudubyada xubnaha taranka ee gudaha dhowr siyood. Qalabka transvaginal waxaa lagu dhejiyaa maqaarka meesha loogu talagalay ee ku taala qeybta daraasadda, aragtida iyo qeexidda shaqo-yaraanta ugu yar. Dhammaan xogta waxaa lagu soo bandhigay shaashadda mashiinka mashiinka ultrasound. Habkan waxaa loo yaqaan 'transabdominal'. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka gaarka ah ee la isku halleyn karo oo la isku halleyn karo waxaa bixiya ultravaginal ultrasound ee xubnaha pelvic. Xaaladdan, dareeraha lagu dhejiyay xubinta taranka haweenka ayaa faahfaahin kara xubnaha sida: ilma-galeenka, ugxan-yari, tuubooyin dhoobo iyo wixii la mid ah.
Maxay tahay sababta loo baahan yahay baaritaanka ka hortagga taranka?
Cilmi-baaristaas waxay awood u siineysaa takhaatiirta in ay aqoonsadaan isbeddelka ka yimaada hawlaha jirka ee miskaha yaryar ee marxaladaha hore ee muuqaalkooda, in kastoo xaalado gaar ah ay lagama maarmaan tahay in la gudbiyo habab dheeraad ah oo loo barto cudurada.
Bayaanka waqtiga saxda ah ee lagu ogaanayo cudurka wuxuu keenayaa habka ugu fiican ee daaweynta, waxay fursad u siinaysaa in laga ilaaliyo dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo xitaa badbaadinta nolosha dumarka. Waa ultravaginal transvaginal ah ee miskaha yaryar oo abuuri kara jiritaanka burooyinka kansarka iyo burooyinka lafdhabarta waqtigooda. Waxay si weyn u kordhineysaa awooda dawooyinka casriga ah iyo takhaatiirta gaar ahaan.
Sidee loo diyaariyaa baadhitaanka jinsiga?
Heerka gaarka ah ee diyaarinta habdhaqanka noocan ah uma baahna oo loo samayn karo marxalad kasta oo wareegga caadada . Sidaa darteed, wakhtiga fulintiisa waxay ku xiran tahay hadba sida degdegga ah ee loo helo natiijooyinka. Sidaa darteed, tusaale ahaan, haddii la dhiso endometriosis waa la filayaa, markaa ultrasmajka taranka waa in la sameeyaa inta lagu jiro marxaladda labaad ee wareegga, iyo haddii loo baahdo in lagu xaqiijiyo joogitaanka malawadka makaanka - ka dib marka hore. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la isku raaco fadhiga dhakhtarka ama shaqaaleeyaha.
Ultrasound-ka uur-jiifka ee uurka
Haddii rikoodhadu caadi tahay, markaa baadhitaankan noocan ah ayaa la samayn karaa muddada u dhaxaysa 11-ka ilaa 14-ka. Waqtiga dheer, waxaa haboon in la beddelo loona yaqaan transabdominal, taas oo ka yar khatar ku ah ilmaha caloosha. Ultrasmergarka ultrasound ee ilmo-galeenka iyo appendages waxaa loo maamuli karaa haween uur leh xaaladaha soo socda:
waxaa jira cabashooyin xanuunka joogtada ah ee caloosha hoostiisa;
xakamaynta burooyinka hore u jiray;
qiimeynta habka daaweynta socota ee cudur gaar ah iyo wixii la mid ah.
Qiimeyn dheeraad ah oo ka mid ah xubnaha miskaha ee dumarka aan uurka lahayn ayaa la siin karaa qanjirada Xakamaynta sheyga. Waxay ku lug leedahay hirgelinta qayb yar oo ka mid ah xubinta taranka haweenka, iyada oo loo marayo baadhitaanka ugu fiican iyo baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan ilmo-galeenka, dhejisyada, iyo derbiyada miskaha yar. Waxa kale oo jira suurtagalnimada hawlgallada yaryar.
Dumarka ku dhacaya dhalmo la'aanta waxaa lagula talinayaa in ay maraan sharraxaad dheeri ah. Habkani wuxuu u oggolaanayaa in uu qiimeeyo xaaladda gudaha gudaha ilmo-galeenka, oo ah endometrium, marxaladaha kala duwan ee wareegga caadada, heerka heerka korriinka ee qulqulka, joogitaanka hormoonnada hormoonnada iyo sababta maqnaanshaha ugxanta, fiiri habka boogta, iyo wixii la mid ah.
Ciladda uurka - calaamadaha
Xakamaynta ukunta uurjiifka
Calool adag ee uurka
Dhumuc dhererka 32 toddobaad
23 toddobaad oo uur ah - maxaa dhacaya?
Goorma ayuu uurka ku jiraa ultrasound?
Xayiraad Chorion ah
Hadday suurtogal tahay in haweenka uurka leh ay isku mid noqdaan?
Sunta ah sunta hore ee uurka
Marka uur-qaadidda caloosha, labadaba bil kasta ka hor
Herpes muddada uurka
Jadwalka BT waqtiga uurka - tusaalooyin
Nafaqada xilliga uurka
Miyaan uur yeelan karaa isla markiiba ka dib markaan dhicin?
Suufiyada haweenka uurka leh leh gacmahooda
Dagaalka Tababarka - ilaa intee ka hor dhalmada?
Tallaalka ka hortagga uurka encephalitis
Hawlgallada Qaranka Latviya
Casseroolka joodariga leh ee caanaha leh caanaha gogosha leh - farmashiyaha
Bixinta uurka inta lagu guda jiro uurka saddexaad ee saddexaad
Antibiotics ee qufaca
Xilliga dayrta ee qurxinta Dior 2013
Sida loo soosaaro toonta leh abuurka foornada?
Tukashada xooggan ee Nicholas Miracle-Worker, beddelaya jiilka
Justin Timberlake iyo Will.I.Am - Kaadiyeyaasha?
Kalluunka kalluunka ee xayawaanka
Daaweynta herpes on bishimaha hal maalin
Fungus on derbiyada - qalabkee ayaa ugu wax ku ool ah?
Sidee loo xoojiyaa muruqyada hoosta haweenka?
Dhar-dharka dharka 2016
Shish kebab ee karski
Waraaqaha fiisaha ee Jarmalka